🥇 ▷ Kalmadaha sirta ah ee Google ayaa doonaya inay tani u noqoto wax la soo dhaafay dadka isticmaala Android ✅
Kalmadaha sirta ah ee Google ayaa doonaya inay tani u noqoto wax la soo dhaafay dadka isticmaala Android
Internetka iyo isticmaaleyaasheeda ayaa la soo deristay dhibaatooyin xagga amniga ah. Tani waa xaqiiqo caalami ah oo si isdaba joog ah loo tijaabiyo iyada oo aan wax badan la qaban. Haddii aan isku halleynno sirta si loo dammaanad qaado amnigaas, runtu waxay tahay in xitaa aysan amnigooda hadda nabad ahayn.
Si loo daboolo baahida loo qabo ilaalin, mustaqbalku wuxuu umuuqdaa inuu hubiyey in furayaasha sirta ah ay tirtiraan. Beddelka kale ayaa soo muuqday Google hadda wax cusub ayaa leh. Dhawaan adeegsadayaasha Android waxay awood u yeelan doonaan inay si buuxda u baahiyaan qaybtaan amniga.
In kasta oo aysan ahayn tan keliya, haddana Google waxay lacag badan gelisay sidii loo tirtiri lahaa furaha sirta ah. Waxay raadineysaa inay adeegsato habab kale si ay u xaqiijiso in xaqiijinta isticmaaleyaasheedu ay yihiin sida ugu amni ee suuragalka ah. Waxay ahayd wado dheer, laakiin midho badan bay ku dhashay.
Google wuxuu doonayaa inuu ku dhammeysto furaha sirta ah ee Android
Mar alla markii aad Chrome ka dhigto mid amaan ah adoo adeegsanaya furayaasha xaqiijinta, Android ayaa imanaya. Dhawaan waxay isticmaali doonaan furitaanka shaashadda si ay u hubiyaan marin u helka goobaha iyo astaamaha kale ee amniga. All la yaab leh oo fudud oo dhakhso ah.
Cadeynta fikirkaan hada waa la helayaa Googlena waxay dammaanad qaadeysaa inay nabdoon tahay kadib. Markii aad gasho bogga passwords.google.com-ka ee ku yaal Android, dib dambe looma weydiisan doono eray sir ah si aad u gasho diiwaan kasta. Xaaladdan oo kale, waxaa lagu weydiin doonaa isla nidaamka fur furista ah ee lagu dejiyay Android.
Sawirka faraha ayaa fure u ah adeegsadaha.
Dabcan, tan waxaa dhab ahaan lagu samayn karaa siyaabo badan. Heerka, PIN ama sawirka faraha oo si isa soo taraysa loo isticmaalo ayaa hadda la heli karaa. Adeegsiga qaababkani waa amaan, maadaama ay maxalli yihiin teleefoonka casriga ah loona tixgeliyo inay amaan yihiin.
Google durba waxay u adeegsataa farsamooyinkan Android gudaheeda xaqiijinta kala duwan. Markaa waxaan haysanaa Google Pay oo aan marin u helnaa codsiyada qaarkood iyada oo kuxiran hababkan xaqiijinta. Haddii Google ay kugu aaminto inaad u isticmaasho Android, waxay sidoo kale kugu kalsoonaan doontaa inaad ku siiso marin u hel macluumaadkaaga.
Fikraddan ayaa horeyba loogu adeegsan karaa taleefanka casriga ah.
Fikraddan ayaa la horumarin doonaa oo la waafajin doonaa. Iminka waxay ku jirtaa barta maareynta furaha Google waana la isticmaali karaa hadda. Kaliya waxay u baahan tahay casriga si ay u socodsiiso Android 7 ama wixii ka dambeeya waxayna ku saleysan tahay isticmaalka FIDO2 iyo borotokoolka WebAuthn.